Ukusabalalisa kuvela enzalweni kodwa i-oregano nayo ingasakazeka ngokutshala ama-cuttings noma ukuhlukanisa isitshalo esimisiwe nokutshala lokhu.
Ukutshala kwe-oregano ngabalimi abakhulu bezentengiselwano kuvame ukwenza ngokutshala izithombo eziye zakhiwa endaweni yokushisa. Izinhlamvu zitshalwe zibe izitshalo ezinamanzi cishe amamitha ayisishiyagalombili kuya kweziyishumi ezijulile. Lapho imbewu ihlume futhi izithombo ezinamandla sezikhulile lezi zihlwanyelwe ensimini.
Izitshalo ze-Oregano kumele zihlukaniswe ngamasentimitha angama-30 emigqeni engama-50 cm. Lokhu kuyimithi yezitshalo ezingamaphesenti angama-60 000 ehektheleni ngalinye. Ukusebenzisa kanye namathrekhi amathrekhi ashiyelwe imikhuba yokuphatha nokuvuna.
Hlwanyela imbewu ye-oregano ibe yizimbewu zembewu ezindaweni ezivikelwe noma ukushisa okushisa phakathi kukaJuni kanti ekuqaleni kwentwasahlobo izithombo kufanele zibe namandla ngokwanele ukutshala emasimini.
Tshala izithombo ze-oregano ekuqaleni kwentwasahlobo. ENingizimu Afrika, zitshala izithombo ngasekupheleni kuka-Agasti kuya ekuqaleni kuka-Septhemba.
Amasonto ayisishiyagalombili ku-greenhouse kufanele akhiqize izithombo eziqinile ze-oregano ezilungele ukutshala. Ukuze kube nokukhiqizwa okusha kwe-oregano, abanye abakhiqizi baqala ukuvuna amathiphu okukhula okusha kusukela emavikini ayisishiyagalombili kusukela ekutshalweni.
Emva kwalokho ukuvunwa okunye okubili kungenziwa ngaphambi kokufakwa kwebusika. Unyaka wesibili wokuvuna ungaletha ukusikeka okuyisihlanu kuya kwesithupha. Izitshalo ze-Oregano zingavuna iminyaka emihlanu uma zilawulwa kahle. Izimila ziqala ukulahlekelwa amandla azo njengoba zikhula ngakho kuphakanyiswa ukuba zithathele izitshalo njalo eminyakeni emine kuya kwemihlanu.
Ngaphambi kokutshala i-oregano, isampula yomhlabathi esimele kumele ithathwe futhi ithunyelwe ukuze ihlaziywe. Lokhu kuzoveza uhlobo lomhlabathi kanye nezidingo zomsoco ezitshalweni ezihlosiwe.
Ukuze uthole umhlahlandlela onzima, lesi sincomo esilandelayo singasetshenziswa uma kungekho ukuhlaziywa kwenhlabathi. Isicelo sokuqala esingu-450 kg se-3:1:5 singasakazwa futhi sifakwe enhlabathini engaphezulu kuka-20 cm ngaphambi kokutshala izithombo ze-oregano. Lokhu kuzokwenza izithombo ezintsha zibe isiqalo esihle ekuzimiseni. Phakathi nezinyanga ezingu-12 zokuqala, kubalulekile ukugcina izitshalo zikhula ngakho-ke ezinye izicelo ezimbili zika-300 kg we-3:1:5 zingasetshenziswa kanye nemigqa yezitshalo, enye ngoDisemba kanti enye ngo-Ephreli. Kunconywa ukutshala emva kokunqunywa kokuvuna.
Nakuba isitshalo se-oregano siyisitshalo esiqinile, ukucindezeleka komswakama kuzokwenza ukukhula nokunciphisa ukukhiqizwa kwamahlamvu. Ukwephuza ngokweqile kuzobangela izifo zezimpande, izimo ze-anaerobic futhi kuncishiswe ukukhiqizwa kwamafutha okubalulekile kanye nekhwalithi.
Kungcono ukufaka amadivaysi okuqapha umswakama ukuze uqaphele njalo inhlabathi. Kuye ngezinhlobo zenhlabathi nesimo sezulu, imiqulu yokunisela iyohluka kusuka ensimini kuya ensimini. Inani eliphakathi liphakathi kuka-25 no-30 mm ngeviki phakathi nezinyanga ezifudumele zasehlobo futhi kunciphisa phakathi nezinyanga ezipholile noma ezinamanzi zonyaka. Ungaphuzi isonto ngaphambi kokuvuna, kodwa ukuchelela ngokushesha emva kokuvuna ukubuyisela inhlabathi emanzini okumswakama okuhle nokunciphisa ukucindezeleka.